Wararkii ugu dambeeyay Khilaafka TPLF Dhabarka ka Jabiyay. | ogaden24
Wararkii ugu dambeeyay Khilaafka TPLF Dhabarka ka Jabiyay.
Dec 4, 2017 - Aragtiyood
Khilaafka xadhga Goostay ee u dhexeeya Hogaaminta kooxda dhiig miiratada ah ee TPLF ayaa Gaadhay Heerkii ugu sareeyay, kadib markii shir in muda ah u socday Golayaasha Kooxdaasi Natiija Hordhac ah oo kasoo baxday lagu sheegay in 4-kamida xubnihii ugu miisaanka cuslaa laga saaray kamid ahaanshaha Gudiga Fulinta iyo Golaha dhexe ee kooxdaasi.
Kooxdani TPLF oo Talada dalkaasi Itobiya 27-kii sano ee lasoo dhaafay xoog kuhaysatay ayaa waxaa usoo dhexeeyay awood ku loolan aan Qarsoonayn, balse waxaa Hardanka kooxda oo soo Jiitamayay tan iyo intii meesha uu kabaxay Horjoogihii kooxdaasi dhiig-yacab males uu haatan xaalku Gaadhay, Halkii ugu dambaysay ee Jiritaanka kooxdaasi uu kusoo dhamaan lahaa maadaama kala amar Qaadashada iyo isku xidhnaantii Hogaaminta kooxdu ay dhimatay koox walibana xusul duub ugu jirto sidii ay tan kale uga Takhalusi lahayd.
War-saxaafadeed 26-kii bishan ay soo saareen Qaar kamida xubnaha Golaha dhexe iyo Gudiga Fulinta, ayay kusheegeen in Gudomiyihii Jabhada TPLF ahaana madaxwaynihii mamulka Tigreega ay kaqaadeen xilkii Gudomiyenimada, sidoo kalana waxaa laga saaray kamid ahaanshihii Gudiga Fulinta kooxdaasi balse Abay Woldu ayaa sii ahaanaya xubin katirsan Golaha dhexe ahna madaxwaynaha mamulka Tigreega.
Warkani maalinimadii Axada kasoo baxay mid kamida Garabyada ku Loolamaya Hogaaminta Kooxda TPLF ee Talada Gumaysiga Itobiya u Af duuban tahay, ayaa 3-da xubnood ee ay sheegeen in Talaabada laga Qaaday waxaa ay kala yihiin.
1) Abay Woldu oo laga xayiibiyay xilkii Gudomiyenimo ee JabhadaTPLF iyo kamid ahaanshihii Gudiga Fulinta, waxaa se loo Reebay madaxwynenimadii mamulka iyo kamid ahaanshaha Golaha dhexe ee Kooxda TPLF.
2) Aseb Masfin oo ahayd xaaskii dhiig-yacab Males Zanaawi ahna Gudomiyaha shirkada EFFORT oo ah tan ugu wayn dalkaasi Itobiya ee saraakiisha kooxda TPLF, ay sida cadaanka ah ugu dhacaan dhaqaalaha iyo Hantidii shacabka.
Aseb Masfin ayaa Gabi ahaan ba laga saaray Golaha dhexe ee Kooxda TPLF waxaana Gabi ahaan ba laga mamnuucay inay wax Kaalin ah kuyeelato Hanaanka siyaasadeed ee kooxda iyo kan Guud ahaan Itobiya inta laga Gaadhayo shirwaynaha Kooxda TPLF ee soo Wajahan, kaasi oo aan la Ogayn sida uu ku Qabsoomi doono maadaama Khilaafka kooxdu gaadhay Heerkii ugu sareeyay.
3) Beyene Mekeru oo isna kamid ahaa Gudiga Fulinta iyo Golaha dhexe ayaa laga saaray kamid ahaanshihii Gudiga Fulinta, waxaa se loo daayay kamdi ahaanshaha Golaha dhexe ee kooxdaasi.
Beyene waa Gudomiye waxaa uu Gudoomiye kuxigeenka yahay shirkada EFFORT ee ay maamusho Asep Mesfin, waxaana shakhsigani uu safka Hore kaga Jiraa shakhsiyaadka la’aamisan yahay inay dhaca iyo boobka ugu badan kagaysteen guud ahaan dalka Itobiya, balse aysan Jirin cid kula xisaabtami karta Hantida xad dhaafka ah ee uu dalka Gudihiisa iyo dibadiisa ku kala aruursaday.
Shirka kooxda oo aan wali si rasmi ah loo soo xidhin ayaa kujira xaalad lagu sheegay Hakad iyo Tur-xaan bixin, waxaana Jira shirar is Garab-yaac ah oo siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidan ee loolanku u dhexeeyaa ay ku kala leeyihiin magaloyinka Addis ababa iyo Maqale, waxaana soo baxaya xogo Tilmaamaya in war-saxaafadeedka maalinimadii Axada ay kooxda Debretsion soo saareen la buriyo.
Abay Woldu iyo kooxdiisa oo mudo dheer ay Gilgilayeen kooxda labaxday Isbadal doonka TPLF oo uu Hormuud u yahay Debretsion Gebremikael, ayaa laga soo xigtay in war-saxaafadeedka labaahiyay uusan ahayn mid Rasmi ah oo si sharci ah uga soo baxay shirka Labada Gole ee Kooxda, waxaana kooxdani laga itaal roonaaday oo dugsinaya Taliyaha Guud ee ciidamada Woyanaha iyo saraakiisha kale Duqayda ah ay ku adkaysanayaan in war-saxaafadeedkaasi yahay mid sharcidara ah.
Kooxda Debretsion ee wajigii Hore ee shirka Guulaysatay ayaa dadaalkii ugu xooganaa ugu Jirtaa inaan waxba laga badalin war-saxaafadeedkii ay maalinimadii Axada soo saareen, kaasi oo 3-kamida shakhsiyaadkii ugu miisaanka cuslaa kooxda ay daaqada kaga saareen.
Shirka Kooxda oo lagu Tilmaamay Gamgamihii ugu adkaa ee abid Horjoogayaasha TPLF Yeeshaan ayaa si aan xidhiidh ahayn tan iyo bilawgii bisha October uga socday magaloyinka Addis ababa iyo Maqale, balse laga soo bilaabo 6-dii bishan November ayay Kooxdu Jilbaha isu dhigatay magalada Maqale oo aan loo kala kicin shirka Labada Gole, waxaana shirkan Goob Joog ka ahaa 18-xubnood oo kamida Qaambaydii Kooxda TPLF ee Horay looga saaray Golayaasha Kooxda, waxayna xubnahan oo xili kamid ahaa kuwa ugu awooda badan ay Qayb ka ahaayeen loolanka xoogan ee u dhexeeya Hogaaminta Kooxda ee Haatan soo saartay Go’aamada lagu muransan yahay.